भाग्य चम्काउन र धन-सम्पत्ति प्राप्तिको लागी यस्तो गर्नुहाेस
September 7, 2019 10:46 pm
तपाईले केहि मानिसले प्राय: जमिनको माटो अनमोल छ भनेको सुन्नुभएकै होला। यो त सबैलाई थाहा छ कि वास्तु र माटोको खास सम्बन्ध हुन्छ । माटोको कारण लाभ पनि हुन् सक्छ नोक्सान पनि, तर माटोको रंगले व्यक्तिलाई प्रभावित गर्छ। यसैले यदि तपाई जग्गा खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने एक पटक त्यहाको माटोको रंग जरुर हेर्नुहोस ।
तपाईको लागी कुन रंगको माटो शुभ छ? जुन जमिनको माटो सेतो छ त्यसलाई ब्राह्मणको लागी लाभदायक मानिन्छ। यदि तपाई अध्यापक हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यसै रंगको माटोयुक्त जमिन खरिद गर्नु सुभ हुन्छ । तर तपाईले घर बनाइसकेको अवस्थामा त्यहाको माटो सेतो छैन भने तपाईले आफ्नो घरमा माटोबाट बनेको एक शोपिस राख्नु पर्छ । तपाई चाहनुहुन्छ भने सेतो फुलको बिरुवा पनि लगाउन सक्नु हुन्छ । .
जो मानिस ब्यापार गर्छन भने लाभको लागी पहेलो रंगको माटो लाई जोड दिनु पर्छ । पहेलो माटो घर र कार्यलयमा छैन भने थोरै पहेलो माटो राख्नुहोस । जो मानिस राजनीतिमा रुची राख्छन र उनीहरुलाई खास सफलता मिलेको छैन भने उनीहरुले रातो रंगको माटोलाई आफ्नो वरिपरी राख्नु फलदायक हुन्छ। रातो माटो नपाइएमा रातो रंगको फुल पनि राख्न सक्नु हुन्छ । एजेन्सी